Høyden - Noors - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: høyden (Noors - Burmees)
Den faste høyden
Om bakgrunnsfargen fyller hele linjehøyden eller kun høyden av de merkede tegnene
နောက်ခံအရောင်က အမြင့်တခုလုံးကို ဖြည့်ထား၊ မထား (သို့) စာအမှတ် အက္ခရာများရဲ့ အမြင့်သာ ဟုတ်၊ မဟုတ်
Høyden for hver celle i tabellen. Kan være et tall eller en prosent.
ဇယားကွက် အခန်းငယ်တိုင်းရဲ့ အမြင့်။ အရေအတွက် တခု (သို့) ရာခိုင်နှုန်းတခု ဖြစ်နိုင်တယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့် စနစ်
Minimum høyde på knappene inne i boksen
​အကွက် အတွင်းမှ ခလုတ်များရဲ့ အနည်းဆုံး အမြင့်
Fyll for barns interne høyde
ကလေး အတွင်းပိုင်း အမြင့် အခုအခံ
အနည်းဆုး ကလေး အမြင့်
Høyde på plasseringen
Gjør GtkTreeView raskere ved å anta at alle rader har samme høyde
အတန်း အားလုံးမှာ တူညီတဲ့ အမြင့် ရှိကြသလို မှတ်ယူပြီး GtkTreeView ကို အရှိန်မြှင့်ပါ
၀င်းဒိုးကို အစပြု ဖေါ်ပြတဲ့အခါ သုံးစွဲတဲ့ ၀င်းဒိုးရဲ့ စံထားချက် အမြင့်
နောက်ခံ အပြည့် အမြင့် ချမှတ်ချက်
နောက်ခံ အပြည့် အမြင့်
Bredde eller høyde på TIFF-bilde er null
TIFF ရုပ်ပုံရဲ့ အကျယ်နဲ့ အမြင့် သုညဖြစ်တယ်
Transformert JPEG har bredde eller høyde lik null.
အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ JPEG မှာ သုည အကျယ်နဲ့ အမြင့် ရှိတယ်။
Transformert JPEG2000 har bredde eller høyde lik null
အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ JPEG2000 မှာ သုည အကျယ် (သို့) အမြင့် ရှိတယ်
Transformert PNG har bredde eller høyde lik null.
အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ PNG မှာ သုည အကျယ် (သို့) အမြင့် ရှိတယ်။
it will be held on (Engels>Tagalog)x **bp video (Indonesisch>Engels)thaduppu oosi in english (Engels>Tamil)child labour in tamil speech (Tamil>Engels)omslaget (Deens>Turks)tulisan arab miftahul fitria (Indonesisch>Arabisch)faalt naar recht (Nederlands>Engels)leo is watching you! (Duits>Frans)i'manobody (Engels>Tagalog)tibi soli peccadi (Latijn>Spaans)collaborator (Engels>Lets)सेक्सी पिक्चर!open (Indonesisch>Engels)juramentada (Spaans>Vietnamees)elle suce la bite de son frere movie (Frans>Engels)mujhe ek question puchna hai (Hindi>Engels)reseta ng gamot (Tagalog>Engels)gadi se thok diya (Hindi>Engels)inco (Pools>Tjechisch)kyu puch nahi sakta kya (Hindi>Engels)halimbawa ng character sketch (Engels>Tagalog)ျမန္မာဖူးကား video (Engels>Burmees)i have completed my graduation (Engels>Hindi)ig (Hongaars>Pools)basiliximab (Italiaans>Lets)apna mobile number dena (Hindi>Engels)